Ummeli e-Amsterdam | I-Lawfirm, Ummeli-womthetho, Law & More
Ingabe usomabhizinisi noma umuntu ozimele ufuna ulwazi olukhethekile, ngaphandle kokulahlekelwa ukutholwa komuntu siqu? Ngemuva kwalokho Law & More iyinkampani yezomthetho e-Amsterdam yakho. Law & More iyinhlangano yomthetho yezomthetho eguquguqukayo, e-Amsterdam ehlanganisa ukwaziwa kwehhovisi elikhulu nokunakwa kanye nensizakalo ehambelana nalokhu oyilindele ehhovisi lokungcebeleka. Futhi kanti ezinye izinkampani zomthetho zinikezela ngosizo lwezomthetho kuphela, abameli be Law & More hamba ngesinyathelo esisodwa. Ochwepheshe bethu e-Amsterdam abanikeli kuphela ukwesekwa okusemthethweni futhi bakusize njengomeluleki noma umeluleki wamacala, kepha abameli Law & More futhi usebenze njengophathina wakho ongaxekile emkhakheni wezomthetho.
UFUNA UMNYANGO EMITERDAM?
Ingabe usomabhizinisi noma umuntu ozimele ufuna ulwazi olukhethekile, ngaphandle kokulahlekelwa ukutholwa komuntu siqu? Ngemuva kwalokho Law & More iyinkampani yezomthetho e-Amsterdam yakho. Law & More iyinhlangano yomthetho yezomthetho eguquguqukayo, e-Amsterdam ehlanganisa ukwaziwa kwehhovisi elikhulu nokunakwa kanye nensizakalo ehambelana nalokhu oyilindele ehhovisi lokungcebeleka.
> Ubuchwepheshe be Law & More
> Inkampani yezomthetho e-Amsterdam
Futhi kanti ezinye izinkampani zomthetho zinikezela ngosizo lwezomthetho kuphela, abameli be Law & More hamba ngesinyathelo esisodwa. Ochwepheshe bethu e-Amsterdam abanikeli kuphela ukwesekwa okusemthethweni futhi bakusize njengomeluleki noma umeluleki wamacala, kepha abameli Law & More futhi usebenze njengophathina wakho ongaxekile emkhakheni wezomthetho. Sineqembu eliqinile, elikhethekile labameli elikulungele ukukusiza ukuxazulula inkinga yakho yezomthetho nganoma iyiphi indlela. Ingabe ufuna ukwazi indlela yethu yokusebenza? Ngemuva kwalokho sicela usithinte.
Shayela ku +31 20 369 71 21
Inkampani yezomthetho e-Eindhoven nase-Amsterdam
Ochwepheshe be Law & More e-Amsterdam
Njengesikhungo somthetho Law & More isebenza emikhakheni yemithetho yobumbano, umthetho wobunikazi bendawo nobuchwepheshe, kanye nomthetho wezabasebenzi, umthetho wokufika kanye nomthetho womndeni. Ngabe ufuna enye indawo yomthetho? Bese ubheka ikhasi lethu lama-appraisals lapho zonke izindawo zethu zomthetho zibhalwe khona. Abameli bethu abangochwepheshe kuzo zonke izindawo ezishiwo futhi bayakujabulela ukukusiza kunoma iyiphi indawo. Uma kukhulunywa ngezinkampani, Law & More zenzelwa osomabhizinisi abasemagatsheni ahlukahlukene, njengezimboni, ezokuthutha, ezolimo, ezempilo kanye nezokuhweba. Ngaphezu kwalokho, abameli bethu e-Amsterdam banolwazi oluningi ekusebenzeleni izinkampani ezintsha nokusiza noma ukuqondisa ukuqala. Abameli bethu basebenzisela ukusebenza emkhakheni wezobuchwepheshe, ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukusungulwa kwamalungelo obunikazi bempahla, ukunikeza amalayisense nokusungula ukunwetshwa.
Inkampani yezomthetho e-Amsterdam
Ngaphezu kolwazi lwethu olubanzi lomthetho wamaDashi (wenqubo), inkampani yethu yezomthetho igcwele izwe lonke ngokuya ngobubanzi kanye nohlobo lwezinsizakalo zethu futhi isebenzela uhla lwamakhasimende angamaDashi angaphandle nawamazwe omhlaba, ukusuka ezinkampanini nasezikhungweni kuya kubantu ngabanye. Ukuze sinikeze amaklayenti ethu insizakalo engcono kakhulu, sinethimba elizinikele labameli bezilimi ezahlukahlukene kanye nabezomthetho, abalwazi kahle ulimi lwesiRussia, phakathi kwezinye izinto. Bayakwazi ukukuhola futhi bakusize kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwanoma iyiphi inqubo yezomthetho, besekela umsebenzi wabo kusu olucatshangwe kahle, olusezingeni eliphezulu. Akunandaba ubuzwe, umgomo oyisisekelo at Law & More wukuthi wonke umuntu kufanele abe nethuba lokuzimelelela amalungelo abo. Ngakho-ke abameli bethu balwela isilinganiso esingcono kakhulu samanani entengo yamakhasimende ethu. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthola usizo lwezomthetho ezingeni eliphezulu nokuthi utshalomali lwakho luzokuziholela.
Ngakho-ke, lapho abameli abajwayelekile banikeza kuphela ulwazi olusemthethweni kanye neso elibucayi, abameli bethu e-Amsterdam banikeza insizakalo enkulu kunamanye amafemu omthetho. Law & More Iqembu e-Amsterdam lisebenza ngendlela esebenzayo futhi yangasese ezinkampanini zamazwe omhlaba nezikazwelonke kanye nabantu abazimele. Ehhovisi lethu e-Amsterdam sinamahora amade wokuvula futhi savulwa kusihlwa nangezimpelasonto. Abameli bethu bajwayele ukusebenza ngokushesha, ukuze ungalokothi ulinde isikhathi eside ukuthola impendulo nge-imeyili yakho noma ngaphambi kokuba ube nesinye sezisebenzi zethu ocingweni. Noma amahora wehhovisi angaphandle ungahlala ufinyelela omunye wabameli bethu. Ijubane nobungcweti kubaluleke kakhulu kithina, okusho ukuthi ungathembela ekukhulumisaneni okubushelelezi nokuqondisiwe. Ingabe unentshisekelo service yethu? Ngemuva kwalokho sicela usithinte. Abameli be Law & More usemsebenzini wakho!
Imikhombandlela yaseYurophu idinga amazwe angamalungu ukuthi asethe irejista ye-UBO. I-UBO imele Umnikazi Wokugcina Ozuzayo. Irejista ye-UBO izofakwa eNetherlands ngo-2020. Lokhu kufaka ukuthi kusukela ngo-2020 kuya phambili, izinkampani nezinhlangano ezisemthethweni ziphoqelekile ukubhalisa abanikazi bazo ngqo. Ingxenye yedatha yomuntu siqu ye- […]
Isinxephezelo ngomonakalo ongeyona into ebonakalayo…
Noma yisiphi isinxephezelo somonakalo ongeyona impahla obangelwe ukufa noma ingozi kuze kube muva nje asizange simbozwe ngumthetho wase-Dutch civil. Lokhu kulimala okungekhona okokusebenza kuqukethe usizi lwezihlobo eziseduze olubangelwa isehlakalo sokufa noma sengozi yesithandwa sabo lapho elinye iqembu kufanele […]
Umthetho waseDashi ekuvikelweni kwezimfihlo zokuhweba
Osomabhizinisi abaqasha abasebenzi, bavame ukuhlanganyela imininingwane eyimfihlo nalaba basebenzi. Lokhu kungathinta imininingwane yezobuchwepheshe, efana neresiphi noma i-algorithm, noma imininingwane engeyona yezobuchwepheshe, efana nezisekelo zamakhasimende, amasu wokumaketha noma izinhlelo zebhizinisi. Kodwa-ke, kuzokwenzekani ngalolu lwazi lapho umsebenzi wakho eqala ukusebenza enkampanini ye- […]
Uzakwethu / Ummeli
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini Law & More angakwenzela njengefemu yezomthetho e-Amsterdam?
Bese usithinta ngocingo +31 20 369 71 21 noma uthumele i-imeyili ku:
Mnu. UTom Meevis, ummeli ku- Law & More - [i-imeyili ivikelwe]
Mnu. UMaxim Hodak, ummeli kanye nokuningi [i-imeyili ivikelwe]